Michael Korsunsky si na Martech Zone |
Edemede site na Michael Korsunsky
Na MGID, anyị na-ahụ ọtụtụ puku mgbasa ozi ma na-ejere ọtụtụ nde ha ozi kwa ọnwa. Anyị na-agbaso arụmọrụ nke mgbasa ozi ọ bụla anyị na-eje ozi ma soro ndị mgbasa ozi na ndị mbipụta ọrụ rụọ ọrụ iji bulie ozi ndị ahụ. Ee, anyị nwere ihe nzuzo anyị na-ekerịta naanị ndị ahịa. Ma, enwerekwa usoro onyonyo buru ibu nke anyi choro ịkọrọ onye obula nwere mmasi na mgbasa ozi nke ndi ala, na-enwe olile anya na-erite uru oru nile. Lee usoro igodo 10 dị